Abụ mmeri Mosis na ndị Izrel bụrụ (1-19)
Miriam so ụmụ nwoke bụọ abụ (20, 21)
E mere ka mmiri na-elu ilu tọwa ụtọ (22-27)
15 N’oge ahụ, Mosis na ndị Izrel bụụrụ Jehova abụ a:+ “Ka m bụkuo Jehova abụ n’ihi na o meela ihe a ga-eji na-akwanyere ya ezigbo ùgwù.+ Ọ tụbala ịnyịnya na onye na-agba ya n’oké osimiri.+ 2 Jaa* bụ ike m na ume m, n’ihi na ọ na-azọpụta m.+ Onye a bụ Chineke m. M ga-eto ya.+ Ọ bụ Chineke nke nna m,+ m ga-ajakwa ya mma.+ 3 Jehova bụ onye agha dị ike.+ Jehova bụ aha ya.+ 4 Ọ tụbala ụgbọ ịnyịnya Fero na ndị agha ya n’oké osimiri.+ Ndị agha ya kacha mma emikpuola n’Oké Osimiri Uhie.+ 5 Mmiri na-ekwo ekwo kpuchiri ha. Ha mikpuru ná mmiri miri emi ka nkume.+ 6 Jehova, aka nri gị dị ezigbo ike,+Jehova, aka nri gị na-akụri onye iro. 7 I ji ike gị dị ukwuu akwatu ndị na-emegide gị.+ Iwe gị na-enwuru ka ọkụ, ọ na-erepịakwa ha ka ahịhịa ọka. 8 Ume si n’oghere imi gị mere ka mmiri guzoro ka mgbidi. O guzoro otu ebe, gbochie mmiri na-asọ asọ. Mmiri na-ekwo ekwo kpụkọtara n’etiti oké osimiri. 9 Onye iro sịrị: ‘M ga-achụwa ha! M ga-achụkwuru ha! M ga na-eke ihe m kwatara n’agha ruo mgbe afọ juru m!* M ga-amịpụta mma agha m! Aka m ga-emeri ha!’+ 10 I kupụrụ ume gị, oké osimiri ekpuchie ha.+ Ha miri n’ime nnukwu mmiri ka nkume led.* 11 Jehova, ònye n’ime chi niile dị ka gị?+ Ònye dị ka gị, gị onye na-egosi na ị dị ezigbo nsọ?+ Onye a ga-eji abụ otuto sọpụrụ, Onye na-eme ihe ndị dị ịtụnanya.+ 12 I setịrị aka nri gị, ala eloo ha.+ 13 I jirila ịhụnanya gị* duo ndị ị napụtara.+ Ị ga-eji ike gị duru ha gaa n’ebe dị nsọ i bi. 14 Ndị dị iche iche ga-anụ ya.+ Ha ga-ama jijiji. Ụjọ* ga-ejide ndị bi na Filistia. 15 N’oge ahụ, ndị isi Ịdọm ga-atụ egwu,Ndị ọchịchị Moab, bụ́ ndị dị ike, ga-amakwa jijiji.+ Obi ga-awụnye ndị niile bi na Kenan n’afọ.+ 16 Egwu na ụjọ ga-ejide ha.+ N’ihi otú ogwe aka gị si dị ike, ha ga-anọrọ ka nkume na-anaghị emegharị ahụ́Ruo mgbe ndị gị gafere n’ala ha, Jehova,Ruo mgbe ndị i kere+ gafere.+ 17 Ị ga-akpọrọ ha ma kụọ ha ka osisi n’ugwu nke gị,+Bụ́ ebe ị kwadebere ka i biri na ya, Jehova,Ụlọ nsọ nke aka gị rụrụ, Jehova. 18 Jehova ga-achị ruo mgbe niile ebighị ebi.+ 19 Mgbe ịnyịnya Fero na ụgbọ agha ya na ndị agha ịnyịnya ya banyere n’oké osimiri ahụ,+Jehova mere ka mmiri oké osimiri ahụ lọghachi kpuchie ha.+ Ma ndị Izrel jere ije n’ala nkịtị, si n’etiti oké osimiri ahụ gafere.”+ 20 Miriam onye amụma nwaanyị, nwanne Erọn, wee were obere ịgbà, ụmụ nwaanyị niile jikwa obere ịgbà soro ya na-agba egwú. 21 Miriam nọ na-ekwere ụmụ nwoke ahụ, sị: “Bụkuonụ Jehova abụ n’ihi na o meela ihe a ga-eji na-akwanyere ya ezigbo ùgwù.+ Ọ tụbala ịnyịnya na onye na-agba ya n’oké osimiri.”+ 22 Mosis mechara duru ndị Izrel si n’Oké Osimiri Uhie pụta. Ha wee banye n’ala ịkpa Shọọ. Ha gara ije ụbọchị atọ n’ala ịkpa ahụ, ma ha ahụghị mmiri. 23 Ha bịarutere Mera,*+ ma ha enweghị ike ịṅụ mmiri dị na Mera maka na ọ na-elu ilu. Ọ bụ ya mere e ji kpọọ ya Mera. 24 Ha wee malite ịkatọ* Mosis,+ sị: “Gịnị ka anyị ga-aṅụ?” 25 Mosis rịọrọ Jehova ka o nyere ha aka.+ Jehova wee gosi ya otu osisi. Mgbe ọ tụbara osisi ahụ n’ime mmiri ahụ, mmiri ahụ tọwara ụtọ. Chineke nyere ha iwu n’ebe ahụ, gosikwa ha ihe ọ chọrọ ka ha na-eme. Ọ nwalekwara ha n’ebe ahụ.+ 26 Ọ sịrị: “Ọ bụrụ na ị ga-ege ntị nke ọma n’olu Jehova bụ́ Chineke gị wee mee ihe dị mma n’anya ya ma na-erube isi n’ihe o nyere n’iwu nakwa ná ntụziaka ya niile,+ agaghị m eme ka ị rịa otu n’ime ọrịa ndị ahụ m mere ka ndị Ijipt rịa,+ n’ihi na mụnwa, bụ́ Jehova, na-agwọ gị.”+ 27 Mgbe e mechara, ha bịarutere n’Ilim, bụ́ ebe e nwere isi iyi iri na abụọ na nkwụ iri asaa. Ha wee maa ụlọikwuu n’akụkụ mmiri.
^ Na Hibru, “Ihe mgbu nwaanyị na-amụ nwa na-enwe.”